अर्थ खबर Archives - Page3of9- www.kchhakhabar.com
सुन तस्कर गोरेले करेन्ट लगाएर गरे सहयोगीको हत्या
विराटनगर – प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका सुन तस्कर गोरे एवं रुपेश भनेर चिनिने चूडामणि उप्रेतीले सहयोगीकै हत्या गरेको खुलेको छ । आफ्नो सहयोगीको रुपमा रहेका उर्लाबारी ७ का ३५ बर्षीय सनम शाक्यको हत्या उप्रेतीले गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । चीनको केरुङ नाका हुँदै तस्करी गरेर नेपाल भित्राएको उप्रेतीको साढे ३३ किलो सुन हराएको विषयमा विवाद भई हत्या गरेको खुलेको मोरङ प्रहरी ...
उटै खुट्टामा उभिएर नाच्ने डान्सर न्यौपाने माथि ठगी मुद्धामा जेल चलान
काठमाडौं/ कलाकार रोमा न्यौपाने काठमाडौं जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि अाइतबार जेल चलान भएकी छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा रोमासँग ३६ लाख ५० हजार रूपैयाँ धरौटी बुझाउन भनेकाे थियाे। अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले उनीसँग बिगो बराबरको धरौटी माग गरेको थियाे। तर राेमाले अदालतले मागेकाे धराैटी बुझाउन सकिनन्। त्यसपछि उनलाइ केन्द्रीय कारागार चलान गरिएकाे...
प्रहरी हेडक्वार्टर पुगे गृहमन्त्री बादल
१६ फागुन, काठमाडौं । प्रहरी अधिकारीहरुबाट सुरक्षा ब्रिफिङ लिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रहरी हेडक्वार्टर पुगेका छन् । बादल १४ फागुनमा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ब्रिफिङको सुरुआत्मा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले संगठनको अवस्था र शान्ति सुरक्षाको स्थितिको बारेमा गृहमन्त्रीलाई अवगत गराएका छन् । अब केहीवेरमा गृहमन्त्री थापाले प्रहरी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिनेछन् । प्रहरी वरिष...
मंगलबार सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँ बढेको छ । सुन तोलाको ५७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार स्थिर रहेको सुनको भाउ मंगलबार तोलामा ६ सय रुपैयाँ बढेको हो । सोमबार सुन तोलाको ५७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै मंगलबार चाँदी पनि तोलामा पाँच रुपैयाँ बढेको छ । सोमबार ७ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी मंगलबार तोलाको ७ सय ५० र...
सुनकाे भाउ उकालाे लाग्याे : हेर्नुस अाजकाे मुल्य
काठमाडौँ | साताको चौथौ दिन बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । मंगलबार प्रति तोला ५७ हजारमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुन आज २ सयले बढेर प्रति तोला ५७ हजार २ सयमा मुल्यमा कारोबार भइ रहेको छ । त्यस्तै गरि चाँदीको मुल्य स्थिर रहेर प्रति तोला ७ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज बुधबार प्रति १० ग्राम छापावाला सुनको मूल्य ४८ हजार ८ हजार ७० रुपैयाँ तोकेको छ भने प्रति १०...
बुटवल पावर कम्पनीको एफपीओमा कति गर्ने लगानी ?
१७ माघ, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो व्यवस्था छ, सेयर आवेदन दिने हरेकलाई कम्तिमा १० कित्ता अनिवार्य दिनुपर्ने । शुरुमा केही आलोचना भए पनि यो नियम केही महिनायता कार्यान्वयनमा छ । गत १७ माघदेखि बुटवल पावर कम्पनीले एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) अर्थात् नयाँ सेयर निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले ४० लाख ८१ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्दैछ । र, चार सय एक रुपैयाँ प्रिमियम दरसहित प्रतिकित्ता सेयर मू...
देउवाको अर्को प्रस्तावः बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार बेरोजगार भत्ता !
माघ १४, काठमाडौं ।कामचलाउ हैसियतमा जथाभावी निर्णय गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई थप निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् । त्यसलाई ‘प्रतिबद्धता पूरा गरेको’ भन्दै उनले अनुचित लागे आउने सरकारले खारेज गरिदिए हुने बताएका छन् ।‘सरकारमा आउनुअघि नै प्रधानमन्त्री भएपछि यो–यो गर्छु भनेर मैले बोलेको थिएँ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुरुमा निर्वाचन आचारसंहिताले गर्न दिएन । त्यतिबेला दलीय सहमतिको सरका...
बैंक कर्मचारीहरुको बिदेसिने होड !
१४ माघ, काठमाडौं । उनले बैंकमा जागिर खाएको १६ वर्ष कट्यो । जागिर शुरु गर्दा सबैको जस्तै उनको पनि सोच थियो, एक दिन बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म बनेर विश्राम लिने । तर, लगभग दुई दशक बित्न लाग्दा उनको जीवनको परिदृश्य फेरिएको छ । अहिले उनको हातमा क्यानडाको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट कार्ड अर्थात् पीआर छ । अब बैंकमा उनको बसाइँ दुई महिना पनि नहुने छाँट छ । उनी अर्थात् दिपेश थापा (नाम परिवर्तन) नेपालको अ...
कुखुराको मासु एक सातामै प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँले सस्तियो ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँसम्म सस्तिएको छ। एक हप्ताअघिसम्म प्रतिकेजी ३ सय रुपैयाँसम्म खरिदबिक्री हुने गरेको मासुको खुद्रा मूल्य हाल २५५ रुपैयाँ कायम भएको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले ब्रोइलर कुखुराको मासुको खुद्रा मूल्य घटेको जनाएको छ। संघका महासचिव काजी थापाले हाल उत्पादन बढेको तर सोअनुसार माग बढ्न नसके...
काठमाडौँ/ लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नेहरु मनोवैज्ञानिकरुपमा लगानी गर्न हच्किएपछि बजार लगातार ओरालो लाग्दै आएको थियो । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जकाअनुसार बजार ३७.११ अंकले बढेर एक हजार ५३० बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्ससमेत ७.४१ बिन्दुले बढेको छ । कूल १६१ कम्पनीको ११ लाख ७० हजार ७२ कित्ता शेय...